राष्ट्रिय कविता महोत्सवका लागि २० कविका कविता छनोट, को-को परे छनोटमा ? — Motivatenews.Com
राष्ट्रिय कविता महोत्सवका लागि २० कविका कविता छनोट, को-को परे छनोटमा ?
मङ्सिर ३, नुवाकोट – नुवाकोट साहित्य प्रतिष्ठानको आयोजनामा यही मङ्सिर १५ गते हुन लागेको दोस्रो राष्ट्रिय कविता महोत्सवका लागि २० कविता छनोट भएको छ । विदुरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उक्त प्रतियोगिताका लागि प्राप्त २४८ कवितामध्ये २० कविता छनोट भएको उक्त प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।
प्रतियोगिताका लागि देशका ६२ जिल्लाका स्रष्टाले कविता पठाएको आयोजकले जनाएको छ । प्रतियोगितामा पहिलोलाई रु ५० हजार, दोस्रोलाई रु ३० हजार र तेस्रो दुईलाई रु २०÷२० हजार नगद पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको उक्त प्रतिष्ठानका संस्थापक अध्यक्ष श्रीराम श्रेष्ठले जानकारी दिए । यसअघि २०७३ सालमा पहिलो कविता महोत्सव नुवाकोटमै भएको थियो ।